XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo maalinta Arbacada ah u safri doonno dalka Itoobiya (AKHRISO SABABTA) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo maalinta Arbacada ah u safri doonno dalka Itoobiya (AKHRISO SABABTA)
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu maalinta Arbacada ah socdaal gaaban ku taggi doonno magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegayaa in safarkiisa magaalada Addis Ababa uu yimid kadib markii uu marti-qaad rasmi ah ka helay ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn.
Safarka madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu qabsoomo kahor inta aanu dhicin shirka 11-ka bisha soo socoto ee May oo lagu qaban doonno magaalada London ee caasimadda dalka UK, kaas oo looga hadli doonno arrimaha Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu gaaro magaalada Addis Ababa waxa uu halkaasi kulamo xasaasi ah kula qaadan doonnnaa ra’iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Hailemariam Desalegn, kuwaas oo kawada hadli doonna xaaladda Soomaaliya, doorka Itoobiya ay ku leedahay Soomaaliya iyo shirka London ka furman doonno.
Dhinaca kale, sarkaal sare oo ku sugan xarunta madaxtooyadda ayaa si hoose warbaahinta Bulshoweyn ugu sheegay in wadahalado dheer oo muddooyinkii dambe u socday Soomaaliya iyo Itoobiya ay ugu dambeyn qasab noqotay in madaxweyne Farmaajo uu go’aan ku gaaro inuu u safro magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee, safarka madaxweyne Farmaajo uu ku taggi doonno magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa noqonaya safarkii ugu horeeyay uu ku tago dalka Itoobiya, tan iyo markii xilka loo doortay, waana safarkii labaad uu safar ku tago dalalka deriska la ah Soomaaliya.